Baydhabo: Boqollaal bukaanno ah oo la siiyay adeeg caafimaad oo lacag la’aan - Radio Ergo
Qaar ka mid ah dhaqaatiirta oo dawaynaya bukaanno/Muxuudiin Xusni/Ergo
(ERGO) – Xaawo Macalin Abshir iyo carruurteeda waxaa ay ka mid yihiin 706 qof oo adeegyo dawayn bilaash loogu fidiyay gudaha magaalada Baydhabo. Labo ka mid ah carruurteed oo la baaray ayaa laga helay malaariya halka iyaduna la siiyay dawooyinka gaaska.
Koox dhaqaatiirka ah ayaa seddexdii todobaad ee u danbeysey dawayn ka waday seddex xero oo ku yaalla Baydhabo iyo xabsiga dhaxe ee magaaladaas. Xerada ay ku nooshahay Xaawo oo la yiraahdo ADC1 ayaa waxaa adeegyadaan ka faa’iiday 203 qof oo ka mid ah dad ku nool xeradaas.
“Waad u jeeda waxaan soo qaatay dawooyinkan noocyada kala duwan leh, xaley ma seexan xanuun dartiis, gaaska aad iigu kacsanaa, Alle ayaa isoo adeejiyay dhaqaatiirtan,” ayay tiri Xaawo oo ah hooyo haysata sagaal carruur ah.
Xaawo iyo qoyskeeda waxay ka afar sano ka hor ka soo barakaceen Daynuunay kaddib abaar saamaysay deegaakooda.
Waxaa sidoo kale ka faa’iiday adeegyadaan Bunow Maxamed Cabdi oo ah 50 jir ku nool mid ka mid ah xeryaha magaalada Baydhabo oo sheegtay in la siiyay dawo ay u isticmaalii doonto dhayida jilb xanuun mudaba ku hayay. Bunow oo haysata lix caruur ah oo kala ah afar gabdhood iyo laba wiil ayaa lix sano ka hor ka soo barakacday degmada Bardaale ee gobalka Bay.
“Si la yaab leh ayaa uu xanuun ii hayay sanadahan, meel aan u cararin oo isbtaal ah ma lahan, meeshii aan tagaba lacag ayaa la i weydiinayay,” ayay tiri Bunow u mahad celisay dhaqaatiirta.
Maxamed Macalin Cabdulaahi iyo seddex carruurtiisa oo ku nool xero barakac waxaa laga daweeyay malaariyo kaddib baaritaan ay u fidhiyeen dhaqaatiirta. Wuxuu Raadiyow Ergo u sheegay in mudo laba todobaad ah ay carruurta ka caajisnaayeen, uu na ku faraxsanahay in xanuunka hayay laga daaweeyo.
“Qaar caloosha ayaa laga hayay, kuwana way qufacayeen, qaar qandho aan ka jabin ayay lahaayeen, dhamaanteena dawada waan qaadanay,” ayuu yiri Maxamed
Kooxdan dhakhaatiir ah oo ka socotay Isbitaalka Tiirow iyo qaar ka mid ah dadka ka ganacsada dawada ayaa bixinayay adeegyadan. Dhaqtar Isxaaq Maxamed Tiirow oo ah agaasimaha Isbitaalka Tiirow oo howshan hogaaminayay ayaa sheegay in dadkan ay ka daaweeyeen cudurka malaariyada iyo shuban biyood. Dadka la daweeyay ayaa kala yimid xeryaha kala ah Tosilow, Xanaano, Bidabiday iyo xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Dhaqtar Isxaaq ayaa sheegay in 26 ka mid ah dadkaas ay ahaayeen maxaabiis ku xiran xabsiga.
IDAACADDA MAANTA TALAADO 26-NOV-2019